Zụta Ethereum na MTN Mobile Money | Paxful
Zụta Ethereum jiri MTN Mobile Money
Paxful na-eme ka ọ dị mma ma dị mfe maka gị ịzụ Ethereum. Chọta ebumnobi orire na ozuzu kacha mma n'okpuru wee zụta Ethereum iji MTN Mobile Money naanị n'uzo 5 dị mfe.
Ọnụahịa otu Ethereum
Ka e si azụta Ethereum na Paxful
Ebumnuche Paxful bu iwetara nde mmadụ ndị na-anaghi enweta ezigbo ọrụ ụlọ akụ nsonye n'ihe ego n'ụwa niile. Anyị na eme ka ọ dị mfe ma nwee ntụkwasị obi iji gbanwere ego gị ma ọ bụ cryptocurrencies ndị ọzọ maka Ethereum (ETH) ma jiri ya ebe ịchọrọ ya nke ukwuu, site na ịzụrụ ihe kwa ụbọchị ruo na ịkọ nkọ.
Ahịa anyị na akwado ndị mmadụ na enye gị ohere ịzụta Ethereum ozugbo site n'aka ndị ọrụ gburugburu ụwa, na enweghị ụlọ akụ ma ọ bụ ndị nnọchi anya ndị ọzọ. Nke a bụ otu ị nwere ike isi zụta ETH ozugbo:
Mepee akaụntụ – Banye iji nweta akpa ego ntaaneti n'efu ebe ị nwere ike ịchekwaa ETH gị n'enweghị nsogbu.
Chọọ maka ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa - Họrọ usoro ọkwụkwụụgwọ masịrị gị, tinye ego ị ga e mefu na ego ọ bụla, wee pịa Chọọ maka ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa. Jiri nlezianya nyochaa usoro nke ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa ọ bụla ma lelee profaịlụ nke onye na ere. Lezienụ anya na ọnụego ha, nnweta, na nzaghachi sitere na ahịa ndị gara aga.
Bido azụmaahịa - Ọ bụrụ na ị kwenyere ihe onye na ere ahịa chọrọ, tinye ego ịchọrọ imefu ma bido ahia ahụ. Nke a ga emeghe mparitaụka ndụ ebe onye na ere ya ga enye gị ntuziaka zuru ezu. Soro ntuziaka ha kpọmkwem ma egbula oge ịjụ ajụjụ ọ bụla.
Nata ETH - Mgbe izipụchara ụgwọ ahụ ma kaa azụmaahịa ahụ dịka akwụgoro, nye onye ọzụụ oge ole na ole iji nyochaa azụmahịa ahụ. Mgbe ahụ, ha ga ahapụ ETH ozugbo na akpa ego Paxful gị.
Hapụ nzaghachi - Gwa anyị na ndị ọrụ ndị ọzọ gbasara ahụmịhe gị na Onyeòtù azụmaahịa gi. Nke a dị mkpa na idebe ikpo okwu anyị maka onye ọ bụla.
Lee etu o si dị nchekwa, ngwa ngwa, ma dị mfe ịzụta Ethereum site na Paxful? Site na usoro ọkwụkwụụgwọ 300+ ịhọrọ site na ya, ịzụ ahịa crypto ugbu a dị mfe ka ọ ga esi di. Gaa na Isi Ihe Ọmụma ma ọ bụ kpọtụ ndị otu nkwado anyị maka ozi ndị ọzọ.